Wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland oo bartamaha bishan ka bilaabanaya dalka Turkiga – idalenews.com
Dowladda Turkiga ayaa marti gelineysa wada hadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya, iyadoo bartamaha bishan uu si rasmi ah uga furmayo caasimada Turkiga ee Ankara.
Wada hadaladan oo horay labada dhinac ugu socday ayaa hakad ku yimid tan iyo markii dowladda Soomaaliya ka baxday KMG, isla markaana Soomaaliya yeelatay dowlad rasmi ah oo aan KMG aheyn.
Wasiirka Arrimaha Dibada Somaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa sheegay in dowladda Turkiga codsi uga yimid, kaasoo ahaa in wada hadalada dib u bilowdaan.
“Sida laga war qabo Soomaaliya iyo Somaliland, sanadkii hore ayay wada hadalo laba geesood bilaabeen, sidii beesha caalamka ku baaqday inay yeeshaan wada hadalo looga hadlayo mustaqbalka siyaasada labada dowladda, labo jeer ayay wada hadalada ka dhaceen London iyo Dubai, hadana Turkiga ayaa naga codsaday inaan ogolaano wada hadalada in dib u bilowdaan”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha dibada Somaliland.
Mr Cumar ayaa sheegay in labo todobaad gudahood uu ka furmi doono shirka, isagoo xusay in bartamaha bishan April ay rajeynayaan in shirkan si rasmi ah uga furmo magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
“Xiriir ayay nala soo sameysay Turkiga, oo soo jeedisay inay marti geliso wada hadalada, iyadoo ka duuleysay shirarkii hore, Turkiga waa dalalka daneeya geeska Afrika, xiriirna la leh labada dhinac”ayuu sii raaciyay Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar.
Waxaa uu sheegay in wada hadaladaas ay dhankooda soo dhoweynayaan, isagoo xusay inay ka war qabaan in dowladda Soomaaliya ay dhankooda diyaar u yihiin in shirka ka qeyb galaan sida uu yiri.
Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in shirka bisha May ka dhacaya London aanay quseyn, isla markaana aysan ka qeyb geli doonin, isagoo ka dhawaajiyay in aanay waxba iska bedelin mowqifkooda ku aadanaa wada hadaladii u dhaxeeyay iyaga iyo Soomaaliya.
Dhowaan ayay aheyd markii uu lagu waday in dalka isu taga Imaaraadka carabta ku kulmaan Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo, inkastoo aanay kulamadaas dhicin, iyadoo Siilaanyo ka soo tagay Imaaraadka, ka hor inta uusan imaan Madaxweyne Xasan Sheekh.
Wasiirka Arrimaha Dibada Finland oo maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho